कहिले सम्मका लागि मिले रेखा र आर्यन ? आयो रुद्रप्रियाको फस्ट लुक (भिडीयो)FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
कहिले सम्मका लागि मिले रेखा र आर्यन ?
आयो रुद्रप्रियाको फस्ट लुक (भिडीयो)
फिल्मी फण्डा । पहिले सँगै फिल्म गरेर निकै नै चर्चा कमाएको जोडी मध्ये रेखा आर्यन एक जोडी हो । फिल्म गर्दै जाँदा एक अर्कामा स्टारडमको घमण्ड बढेपछि दुबैले एक अर्कोलाई आफुले गर्दा फिल्म चलेको कुराहरु दावी गरे । दुईको विवाद मिडियामा ठूलो काण्डको रुपमा प्रचार भयो । रेखाले आर्यनसँग बोलचाल बन्द गरे र आर्यनलाई आफुले फिल्म क्षेत्रमा ल्याएको दावी गरे । आर्यनले त्यसको खण्डन गर्दै रेखासँग काम नगर्ने बताएका थिए । तर पछिल्लो समय दुबैको स्टारडम सकिदै गए । दुबैको फिल्म खासै चल्न सकेन र अन्तिममा यी दुई जोडी एकै ठाउँमा काम गर्ने निर्णय भयो । तर कहिले सम्मको लागि यी दुईको सम्बन्ध ? अर्थात के चल्ला त फेरी पहिले जस्तै यी दुई अभिनित फिल्म ?
८ वर्ष पछी सँगै काम गरेका रेखा थापा र आर्यन सिग्देलको जोडी अब कार्तिक २ गते पर्दामा आउँन तयार भएको छ । नेपाली सिने क्षेत्रमा धेरै विवादहरुलाई साम्य बनाउँदै अब यी दुई अभिनित फिल्म रुद्रप्रिया लक्ष्मीपुजालाई टार्गेट बनाएर प्रदर्शन हुने तरखरमा छन् । अब यो जोडीका फ्यानले रेखा र आर्यनसँगै तिहारको रमझम साट्नेछन् । सुदीप बबी भूपाल सिंहको निर्देशनमा बनेको सिनेमा ‘रुद्रप्रिया’को सोमवार तिन पोस्टर सार्वजनिक गरिएका छन् ।
एक पोस्टरमा झोला बोकेकी रेखा र आर्यन साधारण रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । नारी प्रतिनिधित्व गर्ने टाइटलका लागि रेखाको सोलो पोस्टर पनि तयार पारिएको छ । जहाँ रेखाले पछ्यौराले आफ्नो एक आखाँ छोपेकी छन् । र तेस्रो पोस्टरमा पनि पछ्यौराले आखाँ छोपेकी रेखाले आर्यनको हात समातेकी छन् । भने, आर्यनले निलो छाता समातेका छन् । फिल्ममा राजनराज सिवाकोटी, अर्जुन पोखरेल, सुरेश अधिकारीको संगीत, संजय लामाको छायाँकन, पटकथा रुबी सेन र निर्देशक स्वयम्को छ । ‘रुद्रप्रिया’मा सरस्वती थापा र रमेश एमके पौडेल निर्माताको रुपमा रहेका छन् । सिनेमामा रेखा र आर्यनसँगै राजन इशान, विश्व बस्नेत लगायतका कलाकारको अभिनय छ ।